#Qaallittii_Update! Free all Oromo Political prisoners! – Kichuu
[ January 26, 2022 ] General Hassan Ibrahim and General Bacha Debele are among the generals nominated for ambassadors	News
[ January 26, 2022 ] Battlefield Ethiopia- Objective Eritrea	Videos
[ January 26, 2022 ] Mootummaan Abiy Ahmad humnoota Tigraay waliin mari’achuu akka fedhu maddi Oduu Assoshiyeetid Prees gabaase.	Africa
[ January 26, 2022 ] Diramachuu WBOn Guyaa Araa Umataf Dirmatee Umataa OPDO Fi Fanoo Iraa Baratuun Haqaa Jiruu	Videos
[ January 26, 2022 ] Ethiopia Lifts State of Emergency on Diminishing Security Threat	Africa
HomeAfaan OromooNews#Qaallittii_Update! Free all Oromo Political prisoners!
➛#Qaallittii_Update! Free all Oromo Political prisoners!
-Waan isaan fakkaatan, haala isaan keessa jiran ijaan argee barreeffamaanillee ibsuuf jechan dhabe. Hundi isaanii akka baala mukarraa citee lafa bu’eetitti gogaan isaanii irratti coolagee jira.
–#HAMZAA:- halkan edaa kan duraa caalaa hedduu dhukkubsachaa bule. Ganama kana kophaatti baafamee ciisee jira. Dubbachuuyyuu hindanda’u!
–#BAQQALAA– Haalli Obbo Baqqalaa Garbaa keessa jiran hedduu nama gaddisiisa. Hanga ammaa yaala hin arganne. Beellama kana dura dhibee ija isaanitiif qabanillee ni dhorkaman. Gogaan qaama isaanii irratti coolagee, gurraacha’ee nama biraa fakkaatu.
–#JAWAAR:- nama biraa fakkaata. Namni diiman bifaa fi dhaabbata bareedu sun cilee uffatee, fuullii isaa irratti coolagee nama kan biraa fakkaata. Ol jedhee taa’u miti, dubbachuullee hindanda’u.
-Har’i erga midhaan malee turanii ji’a tokkoo olidha. Ji’a tokko guutuu nyaata malee, beelan dararamaa jiru. Beela qofa miti dhibeen isaanirratti dabalamee wal’aansa yaalatillee dhoowwamanii shiboo keessatti hidhamanii, sagalee dhabanii ukkaamfamnii du’aa fi jireenya gidduutti argamu!
-Leenca addunyaa kana raasetu akka sareetti hidhamee, beelan dararame, du’aaf kaadhimame. Hayyuu fi goota Addunyaan beektutu akka sareetitti barandaa mana hidhaatirratti hidhamee,dararame. Warra beekumsaa fi qabeenya isaanirra darbee kan biroof oolu, qabutu akka nama biyyaa fi fira hinqabneetti lakkaawame. Kuni hundi wallaalummaaf ykn hiyyummaaf miti, ykn yakkaaf miti. Kuni hundi anaa fi si’i, Oromoa fi Oromiyaaf jecha!
By Yeroon Tol
Azhar Kïa Abadir
Kuni mormii Mootummaa Abbaa Irree guyyaa har’a Washington DCti.
Hubachiisa: Vidiyoon yeroo ummaani Oromoo fi Tigraay waal biraa darbani Warabamee malee Hirririi gara garati adeemsifsma ollee.